Volley-ball ao La Réunion: mbola voatazona ho mpanazatra i Rivo | NewsMada
Volley-ball ao La Réunion: mbola voatazona ho mpanazatra i Rivo
Nohavaozin’ny tomponandraikitra eo anivon’ny ligin’ny volley-ball ao La Réunion ny fifanarahana amin-dRandriamamonjy Rivomanantsoa ka mbola notazonina ho mpanazatra ny ekipam-pirenen’i La Réunion, sokajy lehilahy, indray izy.
Marihina fa i Rivo no nahazoan-dry zareo Reonioney ny medaly volamena, nandritra ny “Lalaon’ny Nosy” (JIOI 2015). Fanintelony amin’izao izany ny hitondran’ity mpanazatra malagasy ity ny ekipan’i La Réunion. Ankoatra izay, mpanazatra ny Tampon Gecko Volley izy, hatramin’ny taom-pilalaovana lasa teo.
Raha tsiahivina, mpilalao tao amin’ny Union Jet Club Itaosy ny lehilahy, fony izy mbola teto Madagasikara, izay nandrombaka ny tompondakan’Antananarivo, D2, ny taona 1978. Lany tao anaty ekipam-pirenena Malagasy ny tenany, ny taona 1979, na mbola sokajy “cadet” aza, ny tovolahy tamin’izany fotoana izany. Nandeha nianatra tany Frantsa izy, ny taona 1981, ary nanohy ny filalaovany tao amin’ny klioban’ny Montpellier Université Club. Nandrombaka ny ho tompondakan’i Frantsa, sokajy “junior”, io taona io. Lany tao anaty ekipam-pirenena frantsay i Rivo, taorian’izay, ary voahosotra ho “meilleur attaquant de pointe”.
Niatrika ny « Lalao olympika » tany Séoul, niaraka tamin’ny ekipam-pirenena frantsay. Taorian’io, nianatra ho mpanazatra ary nifindra tao La Réunion. Nitondra ny ekipan’ny Paositra aloha avy eo, notendrena ho mpanazatra ny ekipam-pirenena lehilahy.